ईमेल संचार कहाँ हेड गरिएको छ? | Martech Zone
मँ एक महिना वा अधिक को लागी कार्यको लागि केहि ईमेल राख्नुको बरु खराब बानीमा परेको छु। आउने ईमेलहरूका लागि मसँग ट्राएइज प्रणाली छ। यदि उनीहरूलाई मेरो तात्कालिक ध्यान वा कार्यको आवश्यकता पर्दैन भने कुनै प्रकारको पीडा हुनबाट बच्न, म बस तिनीहरूलाई बस्न दिन्छु। हुनसक्छ त्यो नराम्रो चीज हो। वा हुन सक्दैन।
यस सम्पूर्ण विषयले मलाई साथीको साथ (मेरो "प्रतिक्षा अवधि" को शिकार) सँग कसरी मद्दत गर्‍यो ईमेलको प्रयोग वा उद्देश्य (वा दुबै) कसरी शिफ्टिंग भइरहेको छ भन्ने बारे। यहाँ सन्दर्भ गर्न मसँग कुनै वैज्ञानिक अध्ययन छैन। यो सबै केवल मेरो आफ्नै अवलोकनमा आधारित छ एक ब्यापार संचारकको रूपमा र कोही व्यक्ति जसले वर्षौंको अवधिमा नयाँ टेक्नोलोजीमा तुरुन्त चाँडो अपनायो। (म कर्भको अग्रणी किनारमा छैन, तर म कोमल ढलानको शुरुवातमा छु।)
लेखन मार्फत हामी कुराकानी गर्ने तरिकामा परिवर्तन बारे सोच्नुहोस्। म जनताको बारेमा कुरा गर्दैछु, प्राविधिक जानकार होइन। पछिल्लो दिनमा हामीले हुलाकका पत्रहरू वा सामयिक टेलिग्राम पठाएका थियौं। कुरियरहरू र रातभर सेवाहरूको साथ ती कसरी छिटो सार्न सकिन्छ भनेर हामीले पत्ता लगायौं। र त्यहाँ फ्याक्स थियो। जब ईमेल साथ आयो, हामीले के लेख्यौं? लामो, सही विराम चिह्न, पूंजीकृत, हिज्जे र अन्यथा संरचित संचार। समयको साथ ती धेरै ईमेलहरू द्रुत एक लाइनरहरू भएको छ। अब, एसएमएस, ट्विटर र फेसबुक जस्ता चीजहरूले हामीलाई बृद्धि र ईमिडियसी दिन्छ जसले हामीलाई एक चीजबाट अर्कोमा आशा गर्न अनुमति दिन्छ।
ईमेल के हुन्छ? अहिलेको लागि, म अझै लामो ईमेलको लागि ईमेलमा हेर्छु, अर्थपूर्ण, एक-देखि-एक सामग्री? केहि चीज जुन म र व्यक्तिगत रूपमा प्राप्तकर्ताको लागि हो, तर केवल १ 140० वर्णहरूमा व्यक्त गर्न सकिदैन। मैले अनुरोध गरेको समाचारहरू हेर्न पनि यसलाई प्रयोग गर्छु। र होनि, म यसलाई अझै व्यक्तिसँग कुरा गर्न प्रयोग गर्दछु जसले अन्य मेसेजिंग वा सोशल मिडियामा नराम्रो गर्‍यो।
यदि म मेरो अवलोकनको साथ जहाँसुकै पनि नजिक छु भने, हाम्रो संचार विकासले ईमेल मार्केटिंगमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। त्यसोभए के सोच छ तिम्रो? ईमेलको नेतृत्व कहाँ छ? कृपया तल टिप्पणी गर्नुहोस्। वा, हे, मलाई एक ईमेल पठाउनुहोस्।
टैग: apeमोबाइल-अनुकूल ईमेलसामाजिक मिडिया सचेतहरूटोली भवन
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ सधैं इमेलको लागि ठाउँ हुनेछ ... वा कम्तिमा केहि चीज जुन हामी आज इमेल मार्फत अन्तरक्रिया गर्छौं जस्तो देखिन्छ। हामीलाई जहिले पनि प्रत्यक्ष एक-देखि-एक लिखित संचारको लागि एक माध्यम चाहिन्छ, र उदाहरणहरू छन् जहाँ हामीले लेखेका 140 वर्णहरू भन्दा बढी विस्तृत हुन आवश्यक छ।
उदीयमान टेक्नोलोजीको सुन्दरता यो हो कि हामी त्यो परिभाषामा फिट नहुने सञ्चारका लागि अन्य माध्यमहरू प्रयोग गरेर हाम्रो इमेल अव्यवस्था कम गर्न सक्छौं। छोटो तत्काल सन्देशहरूको लागि एसएमएस, नजिकको वास्तविक-समय सन्देशहरूको लागि IM, एक-देखि-धेरै सन्देशहरूको लागि ट्विटर र फेसबुक, सूचनाहरू प्राप्त गर्नको लागि RSS, टोलीको सहयोगको लागि Google Wave, र यस्तै अन्य।
म सहमत छु कि इमेल अलिकति सरेको छ तर मलाई कहिलेकाहीँ सम्झाइन्छ कि म वक्रको सुरुमा त्यो "प्रारम्भिक अपनाउने" समूहको हिस्सा हुँ। यस कारणले गर्दा, म कहिलेकाहीँ आश्चर्यचकित हुन्छु जब मलाई अरूसँगको अन्तर्क्रिया मार्फत सम्झाइन्छ कि धेरै मानिसहरू अझै पनि इमेलको "ह्याङ" प्राप्त गर्दैछन्। म इमेललाई अर्ध-औपचारिक व्यापार संचार माध्यमको रूपमा हेर्छु, जबकि फेसबुक मेरो व्यक्तिगत सन्देशको लागि हो। मसँग व्यक्तिगत इमेल खाता छैन, केवल एक व्यापार खाता। मेरो लागि इमेल पनि मेरो जानकारीको केन्द्रीय इनबक्स हो... सञ्चारको लागि मात्र होइन। मेरो न्यूजलेटरहरू इमेल, मेरा अलर्टहरू, मेरो व्यापार सन्देशहरू, आदि मार्फत आउँछन् र म सबै कुरा प्रशोधन गर्न इनबक्स शून्य प्रयोग गर्छु।
अक्टोबर 26, 2009 बिहान 2:33 बजे
एउटा चीज जुन म इमेलको साथ सबैभन्दा धेरै संघर्ष गरिरहेको छु त्यो हो यसमा हाम्रो निर्भरता। मेरो एक क्लाइन्टले मलाई यो हप्ता फोन गर्यो र सोध्यो किन मैले उनको इमेलहरूमा जवाफ दिएन ... तिनीहरूले कसैले स्प्यामको रूपमा र मेरो जंक इमेल फोल्डरमा फ्ल्याग गर्न थाले।
यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि इमेल विकसित भएको छैन। यसले पनि मद्दत गर्दैन कि इमेलका रक्षकहरू (Microsoft Exchange र Outlook) अझै पनि 10 वर्ष पुरानो प्रविधिहरूमा चलिरहेका छन्। आउटलुक अझै पनि नयाँ प्रविधिहरू अनुकूलन गर्नुको सट्टा शब्द प्रोसेसरको साथ रेन्डर गर्दछ !!!
म सहमत छु कि यी अन्य प्रविधिहरूले मद्दत गरिरहेका छन्... तर सायद हामी इमेलमा धेरै निर्भरता मुद्दाहरू भएकाले केही नयाँ आउनको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं।
के तपाईंले टिम O'Reilly बाट यो पोस्ट हेर्नुभयो?
वा यो एक:
के यसले तपाइँको पोस्टलाई उत्प्रेरित गर्यो:
मैले मेरो इमेल कम प्रयोग गरेको भए पनि मैले तपाईको कुरा बुझें र मेरा अधिकांश साथीहरूले मलाई मेरो सामाजिक नेटवर्क खातामा सन्देश पठाउँछन्। तर मलाई लाग्छ कि इमेल मरेको छैन वा यसको मृत्युको नजिक निश्चित केहि नयाँ सुविधाहरू थपिएको छ यो अझै लामो समयको लागि यहाँ हुनेछ।